Maxkamad caddeysay siduu u dhintay nin Soomaali ah oo lagu dilay Belgium
Maxkamad ku taalla magaalada Antwerpen ee dalka Belgium ayaa maanta shaaca ka qaaday qaabkii loo dilay Marxuum Caydaruus Cabdullaahi Jaamac oo shalay laga helay maydkiisa isbitaalka, kaddib markii la weysanaa laba usbuuc.
Maxkamaddu, waxa ay caddeysay in la dilay Marxuumka, uuna dilay nin caddaan ah oo u dhashay waddankan. Ninka dilay Caydaruus ayaa Police-ka federalka ahi sheegeen inay gacanta ku hayaan, waxaana ay ka gaabsadeen inay magaciisa sheegaan sababo xagga ammaanka ah awgood.
Ninka wax dilay oo Police-ku ay wareysteen ayaa ku dooday in Marxuumka dhintay uu ka gardarnaa oo uu ku soo qaaday weerar, kaddibna ‘anigoo iska difaacaya ayaan ka tuuray dabaq’ ayuu yiri.
Markaas kaddib ayaa police-ku ay la yimaaddeen ambulance oo ay dhigeen isbitaalka, halkaasoo markii dambe uu ku naf-baxay iyadoon cidna ka war haynin. Muddo kaddib ay Soomaalidii tiqiinnay is weydiinayeen Marxuumka.
Ehellada uu ka geeriyooday Caydaruus ayaa ku howlan inay qareen u qabtaan, si gacan ku dhiiglaha loo horgeeyo sharciga. Dhowr sano ka hor ayaa xaafadda Porte de Namur ee magaalada Brussels waxaa maydkiisa laga helay nin Soomaali oo laga soo tuuray dabaq.
Ninkan oo la oran jiray Cumar Ibraahim ayaa dad badan oo Soomaali ah waxa ay rumeysan yihiin in la dilay, hase ahaatee lama qaban ciddii dishay, waxaase jira dad tuhunsan inuu isagu is dilay.
WARKII HORE EE SOOMAALIGA LA DILEY HOOS KA AKHRI:::
Nin Soomaali ah oo lagu dilay Belgium
Nin dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo la oran jiray Caydaruus Cabdullaahi Jaamac ayaa maanta maydkiisa laga helay qaboojiyaha isbitaal ku yaalla magaalada Antwerpen ee dalka Belgium, kaddib markii muddo 14 cisho la la’aa akhbaartiisa.
Warar ku dhow dhow police-ka ayaa daboolka ka qaadaya in la dilay marxuumka, laakiin lama faahfaahin cidda dishay iyo sida loo dilay. Police-ka federalka ah ayaa u sheegay qaraabadiisa inay iyagu isbitalka dhigeen laba toddobaad ka hor isagoo dhaawac daran uu ku yaallo.
Caydaruus Cabdullaahi oo 30 jir ahaa, waxa uu ku dhashay Soomaaliya. Sannadkii 2000 ayuu yimid dalka Belgium, waxaana uu sannadkii hore ka guuray Brussels oo uu deggenaa. Bishii August ayuu helay warqad caddeynaysa in la siiyey dhalashada waddankan.
Dad ay saaxiibbo ahaayeen ayaa ii sheegay inuu ahaa nin shaqa badan. Waa qofkii shanaad ee Soomaali ah ee muddo afar sano gudahood ah la dilo ama is dila waddanka Belgium gudihiisa.
Maxkamad ku taalla magaalada Antwerpen ayaa maalinta berri ah ku dhawaaqi doonta faahfaahinta dilkiisa, kaddibna waxaa la guda geli doonaa sidii loo aasi lahaa.
Faafin: SomaliTalk.com | October 5, 2004
....NAIROBI::: WAXA ISKU SOO HARAY 28 MUSHARAX
... MINNESOTA::: MASAAJID KU YAAL MINNESOTA OO UKUN LAGU DAADIYEY:
Gabar Soomaaliyeed oo Lagu Afduubay K/Afrika:
Wararka ka imanaya Koonfur afrika ayaa sheegay in gabar Soomaaliyeed lagu Afduubay dalka Koonfur Afrika.
Sida warku sheegay gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Sacdiyo Axmed Maxamud, waxaana laga afduubay East London (ee Cape Town), markii afduubku dhacayey waxaa gabadha la socdey dumaashideed oo magaceeda la yiraahdo Fatuma Cali.
Sid aay werisey hay'adda wararka koonfur Afrika ee SAPA, markii ay saacaduu ahayd 3:15pm ee shalay ayaa gaari ah nooca Mitsubishi-Pajero, inta uu nin ka soo degey uu xoog ku jiidey gabadhii gaarigiina kula cararay. Waxaa wararku sheegeen in ninka gabadha afduubay uu yahay Soomaali la yiri waxaa laga yaaqaan xaafada gabadha la afduubay, waaayo waxaa la sheegay in ninkaasi uu rabey in uu gabadhaas guursado laakiin ay ayadu diidey.
Gabadhan waxa ay ka timid Soomaaliya, waxa ay la noolayd walaakeed oo magaciisa layiraahdo Moqtar Axmed Maxamud sida uu sheegay walaalkeeda kale ee Muxyadin Axmed Maxamud oo intaas ku daray in gabadhani ay wadda dheer oo halis ah usoo martay imaanshaha Koonfur Afrika. Waxana ay Koonfur Afrika timid bishii July. Muxyadiin waxa uu shegay in uu ka cabsi qabo in ninkaasi sababta uu u afduubay gabdha ay tahay in uu rabo in uu Kufsado ganbadha.
Sacdiyo Axmed Maxamud oo ah Gabadha la afduubay da'deedu waa 20jir, waxaana laga afduubay meel shidaalka laga qaato (gas-staion) oo ku taal wadada Buffalo Street, halkaas oo ay ayada iyo dumaashideed u aadeeen in ay telefoon ka dirsadaan. Gabadha la afduubay iyo dumaashideedba ninka way la harjadeen, qofkii gas-stationka joogeyna wuu ku soo orday si uu ugu gargaaro, laakiin ma suurto gelin in ninkaas gabadha laga soo rido, gaarigii ayuuna kula cararay dhankaas iyo wadada Fleet Street.
NIN SOOMAALIYEED OO LAGU DILEY SWEDEN
Taxi Wade lagu diley Seattle:: Feb 2004
MAXKAMADII DILKII SHIDANE.... CANADA